Nepal Record » कम्युनिस्ट को हुन् ? कम्युनिस्ट को हुन् ? – Nepal Record
कम्युनिस्ट को हुन् ?
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट विचार र व्यवहार एवं कम्युनिस्ट नैतिकताबारे प्रशस्तै विवेचना भएका छन्। एउटा असल कम्युनिस्टले धर्म, संस्कृति, परम्परा र संस्कारहरुबारे कसरी सोच्दछ रु चिन्तनदेखि व्यवहारसम्मका श्रृंखलामा उसले आफूलाई कता र कसरी उभ्याउँछ रु यहाँ यसबारे थोरै चर्चा गरिएको छ।
तेस्रो, कम्युनिस्टहरु आलोचनात्मक र क्रान्तिकारी हुन्छन्। एक पत्रकारले माक्र्सलाई सोधे, ‘‘तपाईलाई सबैभन्दा मनपर्ने शुत्रवाक्य के हो रु’’ मार्क्सको जवाफ थियो, ‘‘हरेक कुरामाथि शंका गर।’’ आलोचनात्मक चेतबाट कुनै पनि वस्तु वा घटनाक्रमको अध्ययन गर्नु माक्र्सवाद हो। तर, त्यो आलोचना ध्वंशका लागि होइन, सिर्जनाका लागि हुनुपर्छ। त्यो आलोचना अग्रगति र सामाजिक रुपान्तरणका लागि हुनुपर्छ।